Safarkaygii Islaamka: Tayyibah Taylor waxay nabadgalyo ka heshay Islaamka [Video] | Somaliska
Waa markale iyo khisooyinkii xiisaha badnaa ee ku saabsan Muslimiinta cusub ee diinta Islaamka qaatay. gabadha lagu magacaabo Tayyibah Taylor waxay ka mid ahayd dadkii ugu horeeyay ee diinta Islaamka ku qaatay dalka Canada. Waxay nooga waramaysaa wadadii dheereyd ee ay soo martay.
Waxaan ku dashay wadanka Trinidad ee ku yaala Kareebiyaanka, laakiin waxaan ku soo barbaaray magaalada Toronto ka dib markii waalidkey u soo guureen halkaas. Waxaan ahayn reer Kiristaan ah oo diinta si fiican ugu dhagan, isbuucii 3 goor ayaan kaniisada xaadiri jirnay. Yaraanteydii waxaan ahaa qof baaritaan badan taasoo keentay in aan fahmiwaayo qeybo ka mid ah diinteyda sida waxa loo yaqaan “Trinity” ama sadexda.
Markii aan dhiganayay fasalka 10-aad ayaan qaadanay casharo ku saabsan diimaha caalamka, waxaan waxyar ka baranay Islaamka oo waxaan booqasho ku tagnay Masaajidka. Markii aan masjidka booqanay runtii waxaan aad ula dhacay dhawaqa Aadaanka iyo salaada Muslimiinta. Markii ardadii kale laabteen ayaan go’aansaday in aan dib ugu haro oo la sheegeysto haweeney ka mid ah kuwa Masjidka joogay. Markii ay ii sharaxday Islaamka iyo sida loo galo ayaan isla markiiba go’aansaday in aan shahaadada iraahdo balse xaqiiqadii halkaas Muslim dhab ah kuma noqon.
Bilihii ku xigay aabahay ayaa masaajidka i geyn jiray aniga oo u sheegay in aan arimo iskuulka la xiriira aan u tago, dhowr sano ayaa socotay oo waxaa dhacday in xitaa qaar ka mid ah qaraabadeyda ay Muslimiin noqdaan balse anigu waxaan galay jahwareer. Xitaa waxaan gaaray xili aan go’aansaday in uusan jirin ILAAH.
Laakiin wax badan iguma qaadan in aan xaqiiqsado jiritaanka Allah, waxaan xaqiiqsaday midaas markii aan baaritaano sayniska iyo biology aan sameeyay. Waxaan kale oo isweydiiyay maadaama aad xaqiisaday in uu ilaahay jiro, waa maxay xiriirka aan la leeyahay? Dalka Kanada xiligaas waxaa ka socotay dood kulul oo ku saabsan diimaha.
Waxaan dib u bilaabay in aan raadiyo amaan iyo nabadgalyo, waxaan go’aansaday in aan raadiyo diinta xaqa ah. Waxaa dib iigu soo dhacay Islaamka. Arinta ugu muhiimsan ee aan raadinaayay waxay ahayd nabagalyo iyo isku filaasho. Intaas waxaan ka helay Islaamka.
Xitaa waxaan go’aansaday in aan isaga tago Jaamacada Toronto oo aan ku laabto dalkii hooyo ee Trinidad. Waxaan dhowr bilood ku socday xeebaha qurboon ee wadanka aniga oo wali ku jira baadigoobka nabadgalyada. Markii aan ku soo laabtay Toronto waxaan soo laabtay aniga oo qof kale ah, waxaan noloshayda ku sameeyay isbedel badan. Waqtigaan waxaan go’aansaday in aan noqdo Muslim dhab ah.
Markii hore waalidkey ima aaminin ee waxay iska dhaadhiciyeen “waa wax kale oo ay dooneyso in ay isku daydo” balse markii ay arkeen in ay dhab iga tahay, way soo dhaweeyeen maadaama aan u leexday dhinaca diimaha. Inkastoo ay jeclaan lahaayeen in aan u leexdo dhinaca Kiristaanka.
Markii aan Muslimka noqday waxaa Canada ku noolaa dhowr qof oo keliya oo Muslimiin ah, dadkaas waxaa ka mid ahaa ina adeertey oo guursatay Sheikh Bilal Philips iyo sidoo kale Abdullah Hakim Quick oo ku nool Toronto. Waqti kasta waan kulmi jirnay oo doodo ayaan sameyn jirnay, waxaan noqonay asxaab balse markii dambe qaar badan waxay go’aansadeen in si diinta ay dhab ugu bartaan in ay Carabiga bartaan, ka dibna waxay u guureen Sacuudiga. Aniga keliya ayaa kanada ku soo haray.
Waxaan guursaday nin Maraykan ah oo Muslim ah, waxaan u guurnay maraykanka. Waxaa dhacday in waqti ka dib uu ninkayga shaqo ka helo Sacuudiga oo aan halkaas u guurno. ka dibna waxaan dib ula midoobay asxaabtaydii Toronto. Xiligii aan sacuudiga joogay waxaan si fiican u bartay Quraanka iyo Islaamka.
Runtii Islaamka waxaan ku jeclaaday waa in qofku uu Muslim ahaan garo caalamka meel kasta oo uu ka joogo. Waxaan kale oo jeclaystay sharafka iyo nabadgalyada dumarku ay ka helaan Islaamka. Runtii islaamku waxa uu la midyahay aragtida laga aaminsanyahay Waqooyiga Ameerika ee ah Xoriyad iyo cadaalad, iyo dadaalka nolosha.
March 24, 2012 at 11:22
Masha allah walah wa arin ad logu farxo kuna wana qadana wayo hada nahay somali waxa aminsanahay dinta inan ku dhalanay barashobo noga bahneyn wa wajib in labarto dintena nadifka qasatan dhalin yarada quraha joga wexey aad isu raciyan dhaqan ka xun e galada walalayal dinta islamka ya la ilabin
Masha’allah allaha dhowro walashen iyo kuwa lamidka ah ee kusobira malin kasta dintena qimaha badan ee islamka kuwi ku dhashay islamnimadana kama rebin ducada ayagana intas ka dib run ahanti waa wax lagu farxo qof shalay ku jiray diin la’an iyo jahli manta helay diinta xaqa ah gartay allaha waxidka ah ee aburay oo kalia ah inuu jiro qof lala barbar dhigana aaney jirin guntii waxa ino balan ah inta aan kamidka ahay ee macaanida dintena aan waxba ka aqon in aan u istagno sidi barasho iyo ku camal fal aan ula imaan laheyn inta kale ee wax badan ka taqana diintana ha layimadan ku camal falid iyo sidi ay mugdiga uga sosari lahayen walalaha diin la’anta iyo jaha warerka la jifa wabilahi towfiq
En het was al zo’n bewogen dag, een DAM sceewhurer waar een jaar tegen ge-eist wordt,Iemand die iemand (floortje ) dood reed krijgt een straf van 18 maanden waarvan 5 maanden voorwaardelijk, en dan gaan ze binnen een straal van 10 meter met pistolen lopen zwaaien en als toegift nog een paar schoten lossen ja, dan begrijp ik dat je trek krijgt in een nieuw vers koel en helder biertje
May 13, 2012 at 10:11
Zaterdagavond 16 oktober heebbn we in jullie restaurant gegeten met een groep van 8 personen.Het was gezellig druk en het eten en de bediening was zeer goed, Ook de kinderen heebbn lekker gegeten van het kindermenu.Toen de rekening kwam verraste ons dat nog meer want het was heel betaalbaar.We komen dus zeker terugFam de Graaff en van de Vendel
,,,Joorge George Afrax,,, says:
Islam-ka Gabadhaan oo mar Hore ah, waxaa hadda loo soo dhajiyey aan fahmi la’ahay!? WAxaan Aqaan kuwa mar dhow diinta islam-ka ku biiray! oo fara ku tiris ah! in badan oo ka bax deyna waan Aqaan siiba soomaali badan, ku waas Warkooda , maxaa wax uga maqli la’nahay!?
Iman jama says:
March 27, 2012 at 04:30
Masha allah wll aad ayaad u maahsantahay gabadha walaasheen ahna waan ku halbalyaynayaa juhdi adag ayay soo martay allana wuu waafajiyay wanaaga iyo xaqa lkn wali waan in la sii dhiiri galiyaa si ay kuwa kale u soo dunto in aan tellkeeda helana aad ayaan u jeclaanlahaa si aan ugu dhiiri gali ulana dardaarmo si ay iskugu daydo in ay eheladeeda ay u wacyigaliso iyo sxbbadeedba.
xusen ibrahin says:
March 28, 2012 at 00:02
masha allah ilah waxanu ka baryeyna in ilah nagau sugu dintena macan gabadhasna ajir ilah kasiyo dadalkeda
Wat een verhaal! Ik kom eienilgjk tot de conclusie dat voetbal (profvoetbal) tot zoveel geweld en idioterie leidt (voetballers zelf en ook hun aanhang) dat we die tak van sport maar eens grondig onder de loep moeten nemen en de kosten en baten tegen elkaar moeten gaan afwegen. Wat een aso’s! Ik vrees dat veel mensen in onze samenleving overigens zich zo gedragen: voor het minste of geringste krijg je een grote bek, of klap. Onlangs ook in het nieuws bij RTV Utrecht: fietser die aangereden is door auto krijgt van bestuurder klappen, wordt mishandeld!